Crawfish खाने हो ?
धेरै भयो दौंतिरिमा केही लेख्न नपाएको, लेख्न खोजेको केही फुरेन, त्यसैले मेरो आफ्नो ब्लगमा पहिले नै टांसेको एउटा सामाग्री राखेर टार्दै छु :)
यहाँहरु मध्य कति जनालाई Crawfish को बारेमा जानकारी छ ?, छैन भने, यो एक प्रकारको किरा हो जसलाई अमेरिकाको दक्षिण तिर एक पपुलर delicacy को रुपमा लिइन्छ । विस्तृत जानकारी को लागि यो लिन्कमा हेर्नु होला ।
यो पोस्टमा भने मैले म Louisiana मा छंदा मेरो अपार्टमेन्ट कम्लेक्समा गरिएको एउटा crawfish पार्टीमा मैले खिचेका केही तस्विरहरु राख्दै छु।
Crawfish को पनि खेती गरिन्छ, साधारणतय सिमसार तिर माछा पालन गरे झैं यसलाई पनि हुर्काएर यसरी बोरामा बेचिन्छ ।
बोरामा तयार जिंउदै Crawfish Crawfishपकाउन यस्तो बोइलर को प्रयोग गरिन्छ ।
बोरालाई बोइलर तिर लगिंदै । Crawfish लाई जिंउदै तातो पानीमा खनाउंदै ।
Cajun मसला हालेको पानी मा उमाल्दै । पाक्दै छ है ।
Delicacy पस्कंदै । लौ एक प्लेट Crawfish ।
मिठो भयो जस्तै छ है ।
जस्तो देखिए पनि खांदा भने मिठो नै हुन्छ है, मलाई त खुब मन पर्‍यो :D
Posted by: प्रज्वल Labels: अनौपचारिक
धन्यबाद् प्रज्वल जि, दौतरि को सबल पक्ष नै यहि हो यहाँ हरेक क्षेत्र बिबिधता पाइन्छ। अझ म त भन्छु, साप्ताहिक रुपमा भान्सा सम्बन्धि उपयोगि कोसेलि पनि पस्कने गरे हुन्थियो नि। यो त मेरो जिज्ञासा मात्र हो है।
इटलिमा पनि यो crawfish निकै पपुलर छ, बिशेष गरेर sussage को रुपमा यसलाइ spagetti(चाउमिन) तयार गर्दा प्रयोग गरिन्छ, मलाइ पनि निकै मनपर्छ र धेरै पटक म आफैले पनि तयार गरेको छु।
यसलाइ करीब १५ मिनेट जती बोइल गरेर यसको अनाबश्यक(खान नमिल्ने) भाग हटाइन्छ र कागति, नुन,मरिच, धनियाँसग साधेर पनि खाने गरिन्छ।
साथै यसलाई पोलेर पनि खाने गरिन्छ।
प्राय चाइनिज बफेमा देखिने यो किरो दौंतरीमा पनि आउला भन्ने कहिल्ले सोचेको थिइन। ब्यक्तीगतरुपमा भन्ने भने यो "क्र फिस" नामक रातो किरा प्रती मेरो घोर बिरोध छ। यसो चाइनिज खान गयो, सि-फुड सेक्सनमा हेर्यो निकै आकर्षक देखिन यो रातो किरो सधै १-२ वटा उठाउने गर्छु। हेर्दा रातो राम्रो देखिने बस्तु खान बस्यो खुट्टै खुट्टा । कसरी खाने कसरी? नाम समेत याद गरेको थिइन। नाम भने बल्ल थाहा भयो। खुट्टा यसो हटाएर खान बस्यो कस्तो पिरो गन्ध आउछ। अनी दिक्क लाग्छ किन ल्यांय होला यो रातो किरो जस्तो लाग्छ।
प्रज्वलजीले यसको निकै बर्णन गर्नुभयो, प्रबिणजिले पनि यसको निकै बखान गर्नुभयो। अब यस्लाइ कसरी खाने त्यो पनि भने अर्कोपटक बफे जांदा २-४वटा यो रातो किरा पक्कै सिध्धाउने छु।
हाम्रा गँगटा र यी एकैएकै हुन् जस्तो छ । हाम्रा गँगटा हिलामा बस्ने हुनाले अलि काला हुन्छन हामी जस्तै, यी सफा पानीमा बस्ने भएकाले सेता भएका होलान् अमेरिकनहरू जस्तै !
स्वाद चैं थाह छैन न उता लुड्रयाइयो न यता लुड्रयाइया छ ?
दिमागमा अरूकुरा नफुरे पनि गँगटा फूरेको अवस्थामा प्रज्जलजीको दिमाग कम जाज्वल्य छैन भन्ने मान्यता हाम्रो यो दौंतरी पाटीको रहेको च । िहिहिहिहिहििहि..............।
यो अमेरीकी गंगटा होइनन। साच्चै भन्दा यिनका खुट्टा माकुराका जस्तै हुन्छन। ठुला आंखा र जुंगा स्पष्ट देखिन्छन।
साच्चै पकाएपछि रातो हुने हुन कि कांचै रातो हुने हुन त्यो भने थाहा छैन। खांदा भने पिरो पिरो गन्ध आउंछ। खुट्टा,जुंगा,आंखाले शरिर ढाकेको हुंदा यस्लाइ खान झनै दिकदारी हुन्छ। अर्को भाषामा भन्नु पर्दा यस्लाइ खंदा मैले दिकदारी भेटको छु भनुन।
लौन प्रविण जि, मलाई त इटालिमा पनि क्र-फिस खान्छन भन्ने केही ज्ञान नै थिएन, तपैंको recipe मलाई सार्है सरल लाग्यो । एक बाजी कोसिस गर्नु पर्छ कि क्या हो । त्यो उपयोगी कोशेली पस्कने कुरो मलाई पनि मन पर्‍यो, तर हामी detail मा अरुलाई त्यस्तो recipe बुझाउन सकुंला त? :)
चाइनिज मा त्यती मिठो हुंदैन, त्यसैको कुनै special restaurant छ भने त्यसमा try मर्ने कि ? यो क्र-फिस अलि humid ठाउँ तिर पाइने रहेछ, बिशेष गरी सिमसार तिर (non-fresh water मा पनि पाइने रहेछ) । पहिले पहिले Louisiana ले देश भरी export गर्दो रहेछ । Second world war मा एक जापानी सैनिकले अमेरिकाबाट लगेर चाइना मा झारिदिएछ क्र-फिस, अहिले चाइनाले अमेरिका भरी export गर्दो रहेछ :)
मैले पनि २ बर्षा सम्म गलत रुपमा नै खाएको थिएं, मैले यो पोस्टमा मेरो पेजको लिंक राखेको छु नि माथि, त्यो खोल्नु । त्यसको अन्तिममा एउटा क्र-फिस खान सिकाउने Youtube video पनि राखेको छु मैले :D
Shiva Prakash जि,
गंगटो र यसको फरक मलाई त्यती राम्रो थाहा भएन । यो क्र-फिस पनि रातो र निलो रंग को देखेको छु मैले । यो पनि कंहा फुरेको हो र, पहिले फुरेको लाई फेरी झिकेर टांसेको :D .... तर प्रेरणाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद :)
केटाकेटी हुंदा गंगटा पनि खाइयो । गंगटाको धोती (पछाडिको दुई खुट्टाको बिचमा एउटा कभर जस्तो हुन्छ) खायो भने पौडी खेल्न आउंछ रे भनेर पौडिन सिक्नुको साटो गंगटा खोज्दै हिडेको याद छ । यो माथिको चिज पोलेर खांदा स्वादमा गंगटा जस्तै हुन्छ । तर कता कता झिंगे माछासंग पनि मिल्दो जुल्दो हुन्छ कि ।
बैंककतिर बाटो बाटोमा पनि फ्राइ गरेको यस्तो माछा बेच्न राख्दा रैछन । इटालियन खानामा त ठ्याक्कै प्रविणजीले भने जस्तै हो, उमाल्यो अनि spaghetti संग पकायो । बंगलादेश, फिलिपिन्स, थाइल्याण्डतिर यसको धेरै उत्पादन हुन्छ होला । के गर्नु देशमा समुद्र छैन विदेशमा छोइ नसक्नु महंगा हुन्छन यि कुरकुरे माछाहरु ।